Nhau -Cherechedza zvinhu izvi usati washandisa muchina wekuchenesa zviyo
Ngwarira zvinhu izvi usati washandisa muchina wekuchenesa zviyo
Muchina wekuongorora zviyo chinhu chinodiwa chemuchina mukugadzirwa kwezvekurima kwemazuva ano, uye chinowanzo shandiswa kuongorora, giredhi uye kubvisa tsvina yegorosi, chibage nembeu dzakasiyana. SeMuchenesi Mbeu uye Mugadziri weGrader, goverana newe. Tevere, ngatitaurei nezvezvinhu zvakati wandei zvinofanirwa kutariswa kwazviri tisati tashandisa muchina wekuongorora zviyo.
1. Isa muchina panzvimbo yakatwasuka uye isa magetsi ekudzivirira midziyo.
2. Tarisa kana chikamu chekutumira chakasununguka kana kudonha, kunyanya iyo vibration mota.
3. Tarisa kuti screws dzakasimbiswa here, uye chidzitiro chemuviri chinofanira kunge chakaenzana nematairi ari pasi.
4. Tarisa uone kana paine zvinhu zvekunze mune main fan uye suction fan.
5. Tarisa mafambiro ekumhanya kwefani.
Muchina wekuchenesa zviyo wemukomboni concentrator unogona kutsiva chidzitiro zvinoenderana nehukuru hwezviyo, izvo zvakakodzera chibage, soya, gorosi, mupunga, mhodzi dzesunflower uye zvimwe zvakasiyana tsanga. Hapana guruva rinogadzirwa panguva yekuchenesa zviyo, izvo zvinoshandura zvakanyanya nzvimbo yekushanda yemuchina. Chigadzirwa chacho chakashongedzerwa ne centrifugal fan, muunganidzi weguruva, uye yakavharwa-mhepo discharger. Zviri nyore kufamba, uye dhigirii rekuchenesa rinogona kusvika kupfuura 90%. Iyo yekuchenesa huwandu ndeye: 10 matani / awa.
Muchenesa Mbeu uye Grader
Izvo zvinodiwa zvetekinoroji zvekugadzira zviyo zvinofanirwa kuitika nerubatsiro rwemichina inoenderana. Mumakore achangopfuura, kuburikidza nekugadzirwa kwemichina imwe chete yekupedzisa seti yemidziyo uye kugayiwa uye kutorwa kwemidziyo inotengeswa kunze kwenyika, michina yekugadzira zviyo yakasangana nezvinodiwa zvekugadzira tekinoroji kusvika pamwero wakati. Kuti uwedzere kuvandudza danho rekusimudzira uye kuita kuti mashandiro emuchina wemidziyo isangane nezvinodiwa nedhizaini, uye kusangana nezvinodiwa zvepa-saiti kugadzirisa uye kugadzirisa midziyo, uchifunga nezve chimiro uye tekinoroji yemidziyo, zvinodikanwa kuterera. kune kuyedzwa kwema mechanical parameters uye kushanda kwemidziyo kusangana nekuwedzera kwekugadzirisa Process zvinodiwa.
Kugadziriswa kwemuchina wekusarudza zviyo:
1. Nzvimbo yekupaka yemuchina wekusarudza inofanira kunge yakadzikama uye yakasimba, uye nzvimbo yekupaka inofanirwa kutorwa seyakanakira kubvisa guruva.
2. Usati washanda, tarisa kana zvisungo zvekubatanidza zvechikamu chimwe nechimwe zvakasimba, kana zvikamu zvekutumira zvinotenderera zvishoma nezvishoma, kana pane ruzha rusina kujairika, uye kana kudzvinyirirwa kwe tepi yekufambisa kwakakodzera.
3. Pakuchinja marudzi panguva yekushanda, mbeu dzakasara mumushini dzinofanira kucheneswa, uye muchina unofanira kuramba uchishanda kwemaminitsi mashanu kusvika gumi. Panguva imwecheteyo, shandura kumberi uye kumashure kwemhepo vhoriyamu kugadzirisa zvibato kakawanda kuti ubvise madhipoziti asara pamberi, pakati, uye kumashure makamuri. Zvisikwa netsvina.
4. Kana yakadziviswa nemamiriro ezvinhu uye inofanira kushanda kunze, muchina wacho unofanirwa kuiswa panzvimbo yakadzivirirwa uye kuiswa pasi pemhepo kuderedza simba remhepo pakusarudza maitiro. Kana kumhanya kwemhepo kwakakura kupfuura nhanho 3, kuiswa kwezvipingamupinyi zvemhepo kunofanirwa kutariswa.
5. Nzvimbo dzekuzora dzinofanira kuwedzerwa peturu kuvhiya kwega kwega kusati kwaitwa, kucheneswa nekuongororwa kana kwapera, uye zvikanganiso zvinofanira kubviswa nenguva.
Kambani yedu inotengesawo Seed Cleaner neGrader, tinokugamuchirai kuti mutibate.
Nguva yekutumira: Sep-01-2021